Zavakanto & Kolontsaina · Jolay, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Jolay, 2010
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Jolay, 2010
Namelona adihevitra momba ny fak)n-t)haka ao amin'ny firenena ny hira enina avy amin'ny rakikira fahaefatra navoakan'ilay mpanjakavavin'ny pop Koreana Tatsimo Lee Hyo-ri. Miady hevitra momba izay antony mahatonga ny fisian'ny fakàn-tàhaka eo amin'ny sehatry ny mozika ao amin'ny firenena ireo mpitoraka blaogy.
Azia Atsinanana02 Jolay 2010
Kazuo Ohno, manan-talenta fanta-daza ary iray amin'ireo ray mpamorona ny Butoh, dia nodimandry tamin'ny 1 Jona teo amin'ny faha-103 taonany. Ny Butoh dia dihy fiomanana niforona tany Japana taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, miavaka amin'ny fandokoana ny vatana ho fotsy sy ireo fihetsika maneho hevitra sy fijaliana.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana01 Jolay 2010